Sidey Somaliland uga faa’ideysan karta xoogagaal nimada uu yahey madaxweynaha cusub ee Ghana arrimaha Somaliland. |
Sidey Somaliland uga faa’ideysan karta xoogagaal nimada uu yahey madaxweynaha cusub ee Ghana arrimaha Somaliland.
Runti muddo dheer qalinka umaan qaadan inaan falanqeeyo arrimaha siyaasadda Somaliland. Sababtuna ma
arkayo cid dheg jalaq uu siineysa qoraalada iyo tilmaamaha badan ee tilmaamaya
dhalillahd jira. Haddey tahey tu siyaasadeed, dhaqaale, amni iwm . Waxaana muuqata iney ka darto mooye kama reynayso. Beryahana waxa ku soo kordhey roob la’aan sababey Abaaro ba’an oo galaafatey xoolahi iyo daaqi. Waxa dawladda Sacuudigu joojisey iibsiga xoolaha Somaalido dhan. Sicirbarark maciishadda oo xadhkaha goostey oo gaadhey meel aan waligi gaadhin.
Haddi aan ku soo dhawaado dulucdda qoralkaygan, waxa 7 December, 2016 lagu doortey wadanka Ghana madaxweyne Nana Akufo Addo oo kaso baxey xisbiga mucaaridka ‘’New Patriotic Party’’ kaaso ka guuleystey madaxweyne John Mahama ee xisbigi muxaafidka. Madaxweynaha cusub ee Ghana Nana Akufo Addo wuxu ahaan jirey wasiirka arrimaha debedda ee Ghana waqtiyadi Xukuumaddi Rayaale waxaanu ka mid aha madaxdi Ghana ee aad u taageersana qaddiyadda madax bannanidda Somaliland. Waxaana mahadda iska leh maamulki iyo siyaasaddi arrimaha debedda ee madaxweyne Rayaale, gaar ahaan na wasiirkisi arrimaha debedda mudane Cabdillahi Maxamed Ducaale oo saxiib dhaw la aha . Waqti badan iyo juhdi weyn na geliyey dawladdaha Africa si ICTIRAAF looga helo.
Haddaba iyado aynu ogeyn sida cadaalad darro ee gurigi dawladda looga saarey mudane Cabdillahi Maxamad Ducaale sababta lagu colaadinayo aheyd maxaad Silaanyo uu raaci weydey waqtigi doorashada(maantana kaadirinti UDUB aya ka buuxa xukuumadda Silaanyo). Waxaan qaba haddi Mudane Cabdillahi la xaal mariyo innu aqbali doono innu wax badan Somaliland uga qaban doono xidhiidhka fiican ee uu la leyahey madaxweynaha cusub ee Ghana.